Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Bulshooy, Googiin- Yaa Garanaya Noolaha Duula Ee Ugu Gobsan? By- Xaaji M/rashiid
Maqaal: Bulshooy, Googiin- Yaa Garanaya Noolaha Duula Ee Ugu Gobsan? By- Xaaji M/rashiid
Hordhac- Akhyaareey Noolaha waxaa ugu karaamo badan insaanka sababtoo waa noole kasoo jeeda Nabi aadam, Nabadi korkiisaa ha ahaatee, oo ah kii Rabi gacantiisa ku abuuray. Waxaa kale oo insaanku karaamada ku mutaystay, waa mid ay suurto gasho inuu garto ALLaha abuuray kadibna caabudu inkasta oy jiraan qaar iska dhago adag. Mida kale ee uu karaamada ku mutaystay waa Caqliga oo u horeedaya inuu kala garto xumaanta iyo samaanta. Hadaan masalo kale kusii daro waxaa loo abuuray qaabkii ugu quruxda badanaa oo Rabi SWT sargooyay. Hadaba markaan leeyahay noolaha ugu gobasan waxaan ka hadlayaa inta soo hadhay markii laga reebo insaanka.
Hadaan hordhaca intaa kaga gudbo waxaa jira Noole aan la koobi karin cadadiisa oo kunool dhulkan dushiisa isla markaana aad ukala abuuris duwan. Sidoo kale ku kala nool meelo kala duwan, sida inay qaar biyaha ku dhexnoolyihiin oo kale. Xagga dabeecadda qaar iyagoo dhan waa dhib socda, qaarna waa dheef socota. Qaar kale way kulan sadeen dhibka iyo dheeftaba. Kuwo kale hadaad aagtaba waad ka naxeysaa, meesha kuwo kale aad ku farxeyso markaad aragto.
Waxaan qoraalka ku qadaa dhigayaa Noolaha wada faa’iidada ah isla markana aan siinay sifada gobanimada anigoo sheegi doona waxa uu ku qaatay amaantaas. Noolaha loo yaqaano Shinida waa farsamo yaqaanad heer sare ah oo ku takhasustay qaabka loo sameeyo loona agaasimo Malabka. Waxaa muhiim ah marka hore inaan ogaano inay Qur’aanka kariimka ah kujrto suurad layidhaaho suuradda Shinida, intaasaana amaan ugu filan. Shinidu mayna subax uun iska soo shaqotagin kadibna horay uun malab kama sameynin ee waxaa jira tilmaamo uu rabi ku ilhaamiyay oo loo sheegay qaabkay wax u samayn laheyd. Waxaa kale oo Rabi cadeeyay in malabkeedu uu insaanka daawo iyo wax lagu dabiibo uyahay.
Hadab waxaa jirta in dadka qaarkii iskudayeen inay sameeyaan malab, balse ma noqonin kan shinida oo kale, waxaadna ku garan markay is agyaalaan labada malab waxaa qaalisan ka shinida, Meesha ka dadku riqiiska yahay. Dhaqan ahaan shinidu waxay u dhisantahay qaab dawladeed oo amarka way kala qaadataa waana arinkaas midka sababay in wax soosaarkeeda laga faa’iideysto qarni kasta oo lajoogo. Bal is waydiiya- Imisa dawladood baa aduunka burburay, imisa warshadood ayaa musalafay oo wax soo saarkoodi meesha kabaxay, wali yaa maqlay malab shiniyeed dunida waa laga waayay?
Haday jiraan dad shinda kuu eedaynaya inay Qaniiyo kulushahay markii wax loo doonto, waxaan kaga jawaabi lahaa anigoo afkeeda ku hadlaya, adigaa saaxiib soo dhexgalay shaqo socota oodan war kaheynin meel ay mareyso, marka in lagu qaniino waad muteysatay. Dhanka gobsanideeda hadii laga sii hadlo waxaa kamid ah inay daaqdo ubaxa saaran geedaha dhaladooda. Way adagtahay in la arko shinida oo geedaha hoostooda xaabeysa oo waxaabad moodaa inay iskala wayntahay. In kasta oona daraasad rasmi ah ku sameynin dhaqankeeda hadana waxaan rumeysnahay inay leedahay xeelado badan oon bani’aadamku fahmi Karin gaar ahaan dhanka maamulkeeda, balse inta inoo muuqataayi waa cajiib! Waxaa kamid ah dhaqankeeda inayna wax niyojab ah kaqaadin hantideeda goor walba la qaadanayo iyadoo kolba meel cusub ka hawlgaleysa.
Aan warka shinida intaa kasoo koobee, waxaan uga dan leeyahay inay soomaalida ogadenya hadafkooda usarreeya kadhigtaan Qadiyadooda xalaasha ah. Isla markaas ogaada hadii loo istaago qadiyada oo ah madaxa baahideena, waxa kale oo dhani way xalismayaan. Waxaa kale oo guusha lagu gaadhi karaa inaan marna la niyo,jabin sida shinida oo kale, shaqaduna ay halkeeda kasii socoto.
Isku soo wada duuboo waxay soomaalidu tidhahaa- Biyo Sacabahaaga ayaa lagaga dhargaa!